Qaranka kaliya ee Jasiiradda ka xor ah Coronavirus wuu xirnaan doonaa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ku Saabsan Jasiiradaha Cook » Qaranka kaliya ee Jasiiradda ka xor ah Coronavirus wuu xirnaan doonaa
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Ku Saabsan Jasiiradaha Cook • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Cusub ee New Zealand • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wax yar ka dib markaad ka soo degto Rarotonga waxaad kaxayn kartaa haro cad oo qafiif ah, adoo ku cabbaya khamrigaaga ugu horreeya ama barkadda nasashada ee goobtaada quruxda badan. Meel kasta oo aad joogto ama waxaad rabto inaad sameyso, jasiiradaha adiga ayaa iska leh inaad ku raaxaysato firaaqadaada.
Dabcan tani waa haddii aad halkaas gaari karto
The Cook Islands dib uma furi doono safarka, waxa ku jira suuqgeeda ugu weyn ee dalxiiska ee New Zealand ilaa laga waayo gudbinta bulshada ee Covid-19 muddo 14 maalmood ah iyo socdaalayaasha ka weyn 12 ayaa si buuxda loo tallaalay
Xuduudaha Jasiiradaha Cook ayaa lagu xiray New Zealand iyo inta badan waddamada kale in ka badan saddex toddobaad tan iyo markii ugu horreysay ee Delta la soo sheegay 16 -kii Ogosto Auckland.
Jasiiradaha Cook Islands waa qaran ku yaal Koonfurta Baasifigga, oo xiriir siyaasadeed la leh New Zealand. 15 jasiiradood ayaa ku baahsan dhul aad u ballaadhan. Jasiiradda ugu weyn, Rarotonga, waxaa ku yaal buuro kacsan iyo Avarua, caasimadda qaranka. Dhanka woqooyi, Jasiiradda Aitutaki waxay leedahay lago aad u ballaaran oo ay ku wareegsan yihiin dhagaxaan iyo dhulal yaryar oo gasiirado ah. Waddanku wuxuu caan ku yahay meela badan oo lagu maydho iyo meelaha lagu quusto.
Dowladda Jasiiradaha Cook ayaa isla markiiba xirtay safarka, kaliya waxay u oggolaatay Kiwis oo ku sugan Jasiiradaha Cook inay soo laabtaan.
Raiisel wasaaraha Cook Islands Brown ayaa sheegay in waqti uun mustaqbalka, dhammaan waddamadu ay la noolaan doonaan Covid-19. Si kastaba ha ahaatee, wakhtigaasi ma ahayn hadda kuwa Jasiiradaha Cook, maadaama ay si dhow ula socdaan barnaamijka dillaaca Delta iyo barnaamijka tallaalka ee New Zealand.
Jasiiradaha Cook waa mid ka mid ah dalal aad u yar oo adduunka ah oo ku guuleystey inay ka ilaaliyaan Covid-19.
In Jasiiradaha Cook Cook ee Sebtember waxay ballan qaadeen inay sii ahaan doonaan Coronafree.
Brown wuxuu u sheegay warbaahinta New Zealand: “In kasta oo aan qirayno in waqti uun mustaqbalka dhammaan waddammada ay u baahan doonaan inay bartaan la-noolaanshaha Covid-19, waqtigaas weli ma imaan.”
Wuxuu si cad u caddeeyay in Jasiiradaha Cook aysan doonayn inuu dillaaco COVID. Wuxuu intaas ku daray, saameynta ay ku yeelan doonto ilaha caafimaad ee Boqortooyada iyo sidoo kale dhaqaalaha ay noqon doonto mid aad u xun.
Brown wuxuu sheegay in dowladiisu ay samaynayso wax kasta oo suurtogal ah si loo ilaaliyo caafimaadka iyo samaqabka Jasiiradaha Cook iyo sidoo kale dhaqaalaha dalka.
In ka badan 300 oo ka mid ah Jaziiradaha Cook Cook ee ku xayiran New Zealand waa inay sugaan ugu yaraan Talaadada soo socota si loo ogaado inay ku laaban karaan dalkooda iyo in kale.
Brown wuxuu sheegay in dowladdiisu ay fiirineyso duulimaadyada dib -u -celinta ee ka imaanaya Christchurch kuwa ka baxsan Auckland ee aagagga 2, laakiin weli lama cayimin taariikhaha.
Socotadaas waxay u baahnaan doonaan inay bixiyaan tijaabo xun oo ah 'Covid-19' 72 saacadood ka hor bixitaanka, dhammaystir foomka dalabka soo noqoshada ee Maareynta Cook Islands oo la mariyo karantiil khasab ah oo toddobo maalmood ah markay yimaadaan magaalada caasimadda ah ee Rarotonga.
Brown wuxuu yiri halista Covid-19 awgeed, Cook Island Islands ee Auckland waa inay sugaan hoos-u-dhac ilaa heerka 2 ama ka hooseeya ka hor inta aan loo oggolaan inay duulimaad ku qaadaan guriga.
Golihiisa Wasiiradu waxay sii wadi doonaan inay dib u eegaan macluumaadka iyo talooyinka cusub ee mas'uuliyiintooda caafimaadka marka tirada tallaalka ay ku badato New Zealand.
Saamaynta masiibadu ku yeelatay dalxiiska Jasiiradaha Cook iyo dhaqaalaheeda waxay ahayd mid aad u weyn, iyo dillaaca New Zealand waxay carqaladeeyeen koritaanka.
Maalgelinta $ 15 milyan ayaa loo qorsheeyay taageero dheeri ah oo la siiyo ganacsiyada Jasiiradaha Cook laga bilaabo miisaaniyadda Juun.
Kaalmada mushaharka ayaa sii socon doonta bisha Sebtembar iyo deeqaha ganacsiga, oo ay ku jiraan deeqaha ganacsadaha oo kaliya, ayaa dib loo soo celin doonaa Oktoobar.
“Waxaan ognahay in suuqgeena dalxiiska uu yahay mid adkeysi leh sidoo kale dhaqaalaheena sidoo kale. Waxaan aragnay sida dhaqsaha leh ee dalxiisku dib ugu soo laabto May, oo mar kale ayay dhici doontaa ”, ayuu Brown ku yiri silig war oo New Zealand ah.